HALKAAN KA AKHRISO :WARARKA W.M.TIMES EE MAANTA OO AH KAHMIIS 8-DA ABRIIL 2021-KA
Thursday April 08, 2021 - 08:50:06 in Wararka by Super Admin
DOORASHADA SOMALIYA: "HAL WADDO AYAA FURAN MAR HADDII UU FASHILMAY SHIRKII MADAXDA FEDERAALKA & D/G/DYADA"
Shirkii wadatashiga qaran ee dhammeysti rka arrimaha doorashooyinka ayaa u muuqda in uu miro dhal noqon la'yahay kaddib markii ay dhinacyada isku fahmi waayeen qodobbadii la ga hadlayay.
Dowladda Soomaaliya ayaa madaxda Jubaland iyo Puntland ku eedeysay in uu dhankooda ka socon waa yay shirka xalka loogu raadi nayay khilaafka doorasha da. Hase yeeshee Madax weyneyaasha labada as maamul goboleed, Ax med Maxaed Islaam iyo Siciid Cabdullaahi Deni ayaa iyagana dhank ooda dowladda federaalka ku dhaliilay in aysan diyaar u ahayn xalka.
Beesha Caalamka ayaa in muddo ah dadaal ugu jirtay inay hoggaamiyeyaasha isku af gart aan hannaanka doorashada islamarkaana dha mmeystiraan heshiiskii September 17, 2020.
Dad badan waxay hadda isweydiinay aan tal laabada xigi karta haddii uu fashilmo shirka mad axda iyadoo wali aan wax heshiis ah laga gaarin khilaafka doorashada ka dib dhacday waqtig eeda.
MAXAY TIRI DOWLADDA FEDERAALKA?
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya,Abuukar Cismaan Dubbe ayaa mas'uuliyiinta Puntland iyo Jubalad ku dhaliilay in markii hore "ay diid een doorasho qof iyo cod ah kaddibna ay ay fulin waayeen heshiiskii ay saxiixeen ee Sep tember 17, 2020".
Wuxuu sheegay in dowlad da Soomaaliya ay dadaallo badan ku bixisay xal u helid da xaaladda doorashada laak iin "mar walba ay wax ka soc on waayeen dhinaca Puntland iyo Jubaland".
"Si loo dardar galiyo hirgalinta heshiiska 17kii September, madaxweynaha dowladda feder alka Soomaaliya, mudane Maxamed Cabdull aahi Farmaajo wuxuu isugu yeeray kulamo ba dan oo is daba joog ah laakiin nasiib darro mad axda Jubaland iyo Puntland way ka baaqsade en kumadaas marka laga reebo kii sama reeb oo ay la yimaadeen shuruudo cusub," ayuu yi dhi wasiir Abuukar Duube.
Shir jaraa'id oo uu ku qabtay muqdisho ayuu wasiirku ku yidhi: "Markii shirkii Afisyoone ee saddexdii April ay markii koowaad ka qeyb gal een madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubaland waxay keeneen caqabado ay kow ka tahay inay duraan baarlamaanka oo ah sharciyadda dalka ugu sarreysa iyagoo sheegaya inuu waqtigiisu dhammaaday."
Wasiirka Warfaafinta intaas ku daray: "Wax walba oo la sameeyay markii ay natiijo la'aan ka soo baxday oo maalin walba shuruudo cusub im aadeen, ugu dambeyn xukuumaddu waxay Shalay u caddeyneysaa umadda Soomaaliyeed in labada madaxweyne goboleed ee Puntland iyo Jubaland aysan rabin inay dalkan ka dhacdo doorasho uu aasaaskeedu yahay 17kii Septe mber iyo isfahambii 16kii February, waana wax laga xumaado in labadaas madaxweyne ee Pun tland iyo Jubaland ay noqdeen jid iyo jiho diid aan doorasho oggoleyn."
MAXAY ARRINTAN KA DHAHEEN PUNRLA ND IYO JUBALAND?
Wasiirka Warfaafinta Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi Timacadde oo warbaahinta la hadlay isagoo ay garab taagnaayeen wasiirro ka tirsan maamulka Jubaland ayaa sheegay in labada maamul aysan dhankooda ka warqabin fashil ku yimid shirkii Muqdisho, balse ay warbaahinta uun ka arkeen wasiir Dubbe oo sheegaya arrant aas.
"Waxaan umadda Soo maaliyeed iyo beesha caal amka u sheegaynaa inaa nu jirin shir fashil may oo ay og yihiin dowladaha Jub aland iyo Puntland. Madax da dowladaha Jubaland iyo Pun tland waxay mu ddo bil ah Caasimadda u jooge en qaabkii ay Soomaali u aadi lahayd doorasho oyinkii la su gayay ee dib u dhaca badan ku yimid."
Timacadde wuxuu sheegay in dowladda fede raalka ay kusoo kala tageen in lasoo kala ta shado.
"Shalay oo ay ahayd maalintii ugu rajada ro oneyd oo aannu fileynay inay noqoto maalintii la isku raaci lahaa qaabkii doorashada loo aadi la haa shirka wuxuu madaxweynaha xilligiisu dha mmaaday kusoo xiray in lasoo kala nasto oo la soo kala tasha do."
Wali ma jiro war kasoo baxay dhinaca bee sha caalamka oo isku dayeysay inay dhinacy ada iska soo horjeeda ku qanciso sidii ay he shiis siyaasadeed ku gaari lahaayeen.
MAXAY TAHAY WADDADA FURAN SHIRKA FASHILMAY KA DIB?
Markii la isku fahmi waayay kulamadii mad axda federaalka iyo maamul goboleedyada Jua baland iyo Puntland, waxaa qof walba maska xdiisa ka guuxaysa tallaabada xigta ee la qaadi karo.
Daahir Qoriyow Isaaq oo wax badan la soc da siyaasadda Soomaaliya, ayaa BBCda uga warramay waxa loo fasiran karo hadalka kasoo baxay dowladda Soomaaliya.
"Waxaa loo fasiran karaa in arrimihii dhac ayay oo dhan ay ahaayeen i jiid aan ku jiido, oo iska gacmo daalis ah. Waxaa wanaa gsaneyd inuu kasoo baxo war natiijo leh oo dadka Soo maaliyeed ka farxiya. Labada dhinacba iyagoo muddo badan halkaas wada joogay inay natiija daas kasoo ba xdo waa laga fiicnaa," ayuu yidhi.
Falanqeeyaha siyaasadeed ayaa sheegay in jidka kaliya ee hadda furan uu yahay "in BFS uu go'aan ka gaaro xal u helidda khilaaf ka doora shada".
"Waxay ila tahay, maadaama dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyadii ay waayeen xallin hadda xalka laga raadiyo baarlamaanka
Xagiisa. Waa in la aado baarlamaanka maada ama ay iyagu yihiin sharci dajintii. Waxaa fiicn aan lahayd Shalay haddii ay jirto maxkamadda dastuuriga ah oo la aadi lahaa.
"Marka hadda G/Sharci dajinta oo 2da dhin acba ay taageerayaal ku leeyihiin ayay tahay in la weydiiyo waddanka samata bixintiisa oo ay ka sheekeystaan sidii waddankan uu doo rasho u aadi lahaa," ayuu yidhi Daahir Qoriyoow.
Muddada xilheynta mad axweyne Maxamed C/hi Farmaajo oo afar sano aha yd ayaa ku ekeyd 8dii February. Mucaaradku waxay sheegeen inaysan mad axweyn aha aqo onsan eyn. Dowladduse wax ay sheegtay in ma daxweynahu xilka heyn doo no ilaa inta laga do ora nayo maamul cusub. Ma jiro waqti la og ya hay oo ay doorashadu dhici doonto.
WAKIILADA BEESHA CAALAMKA OO KULAN DEG DEG LA YEESHAY QOOR QOOR, GUUDLAAWE IYO LAFTAGAREEN
Wakiillada Beesha Caalamka ee C6+ ayaa Xalay xarunta UNka ee Xalane shir gaar ah ku la yeeshay Madaxweynayaasha dowladgobol eedyada taabacsan dowladda federaalka ee Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed.
Sida aan xogta ku helnay shirkaas ayaa looga wadahadlay sidii loo badba adin lahaa fashilka ku yimid wadahad alladii loogu gogol xaarayey shirweynaha wadatashiga ee xalka looga gaara yo khilaafka doorashada.
Waxaa Shalay natiijo la’aan ku dhammaad ay shirkii Teendhada Afisyooni uga socday ma daxda DFS iyo dowlad goboleedyada, waxayna markii lagu kala tegay xukuumaddu shaacisay in Jubbaland iyo Puntland ay shirka fashiliyeen, isla markaana ay diideen wax kasta oo xal ah.
Haseyeeshee warsaxaafadeed ay si wadajir ah u soo saareen Jubbaland iyo Puntland waxay ku sheegeen in aysan ka warqabin shir fashilm ay, balse kaliya ay ka war hayaan in madaxwe yne Farmaajo uu Shalay dalbaday in latashiyo uu soo sameeyo maalmo aan la cayimin.
Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntl and waxay sidoo kale cadeeyeen inay diyaar u yihiin ka qeyb galka iyo sii socoshada shirarka xalka loogu raadinayo khilaafka doorashada.
Ilo ku dhaw shirka Xalay dhexmaray xubnaha beesha caalamka iyo madaxda maamullada taabacsan dowladda federaalka ayaa Caasim ada Online u sheegay in beesha caalamku ay culeys ku saartay madaxda seddaxda maamul goboleed in aysan shirka ka bixin, maadaama ay mar kasta u hoggaansamaan go’aanka uu qaato Madaxweyne Farmaajo.
Waxaa haatan bilaawday dadaalo ay wado beesha caalamka oo lagu doonayo in shirarka hoggaamiyeyaasha Soomaaliya ay sii socdaan, illa xal laga gaaro khillaafka doorashooyinka dal ka.
MAXKAMADDA CIIDAMADA OO XUKUNTAY XUBNO KA TIRSAN ALSHABAAB
Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa Shalay waxaa ay xukuno kala duwan ku riday Rag iyo dumar lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen Ururka AlShabaab kana howlgalayeen Magaalada Muqdisho.
Dadka ay Maxkam adda xukunka ku riday ayaa waxaa ay kala ahaayeen.
1: Safiyo Cali Guure iyo Gabadheeda Nasro Daa’uud Ismaaciil oo lagu eedeeyay in Gu rigooda ay Hubka noocyadiisa kala duwan ugu keydin jireen AlShabaab kana kireysay Gurig eeda Xubno ka tirsan AlShabaab.
2:Sakariye Xasan Yuusuf ayaa lagu helay inuu ka tirsanaa AlShabaab una qaabilsanaa di lalka qorsheysan ee laga fuliyo Magaalada muq disho, sidoo kalena uu ku tuuray bam aan khas aaro geysan Dugsiga 21 Oktoober ee degmada HowlWadaag.
3: Maxamed Ciise Sheekh Cumar oo lagu he lay in uu bambooyin aan khasaaro geysan ku tuuray Baraha Koontorrool ee Ciidamada dowl adda ku leeyihiin laamaha AlBaraka iyo Warsh adda Biyaha Caafi.
4: Cabduqaadir Abuukar Xasan oo ahaa isku duwaha Xubnahan ka tirsan AlShabaab iyo ho wlgeliyahooda halka Cabdiqani Xasan Xaashi uu ahaa Madaxa qarsoon ee AlShabaab ee Go bolka Banaadir.
Hay’adaha Amniga dowladda Somaaliya ay aa waxaa la sheegay in Xubnahan ay kasoo ka la qabteen degmada Deeyniile, degaanka Cee lasha Biyaha, Yaaqshiid iyo degmada Hodan Bi shii November ee sanadkii 2020.
Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay in Cab duqaadir Abuukar Xasan lagu xukumay Xabsi daa’in, halka min 15 sano sano oo Xabsi ciidan ah lagu xukumay Safiyo Cali Guure, Cabdiqani Xasan Xaashi, Maxamed Ciise Sheekh Cumar iyo Sakariye Xasan Yuusuf halka Saddex sano oo Xabsi ah lagu xukumay Nasro Daa’uud Ism aaciil
CIIDAMADA DFS OO ALSHABAAB KALA WAREEG AY DEEGAANO CUSUB OO KA TIRSAN GOBOLKA GALGADUD
Warar dheeraad aha aya ka soo baxaya da gaal culus oo ciidamada dowladda fedraalka So omaaliya iyo dagaalamayaasha Alshabaab ku dhexmaray deegaano dhaca Koonfurta ma gaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maa mulka Galmudug.
Dagaalka oo aad u cuslaa ayaa cidamada do wladda iyo dagaalamayaasha Alshabaab waxa ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan,islamarkaana la wareegay deegaano dhowr ah.
Ciidamada dowladda ayaa ku siqay farismo dagaalamayaasha Alshabaab ay ku lahaayeen deegaanka Sinadhaqo,labidulle iyo dhabana, halkaas oo ay Alshabaab ka soo weerari jireen Dhusamareeb.
Goobahan Ciidamadu la wareegeen oo dag aal culus ka dhacey ayaa lasoo warinayaa in Al shabaab ay kaga tageen meydadka 6dagaal ame iyo saanad ciidan sida ay xaqiijiyeenSar aakiisha Ciidamada hoggaaminaysa.
DOWLADDA OO SAXIIXDAY HESHIIS TALLAAL KALE LAGU KEENAYO DALKA SOMALIA
Danjire Cawaale Cali Kulane Safiirka DFS dalka Shiinaha ayaa heshiis ku aadan hilida ta laalka ka hortaga Cudurka aduunka Aafeeyey ee COVID19 la galay shirkadda Sinopharm ee dalka Shiinaha.
Tallaalkan looga hortagayo Cudurka Coron avirus ayaa waxa uu gaaraya 200 kun oo tallaal oo dhawaan la qorsheeyay ee la keeno M/ Mu qdisho ee Caasimadda dalka Soomaaliya.
Safiirka Dowladda Federaalka ee dalka ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in tallaalk an ay dowladda aan saa xiibada nahay ee Shiin aha dalka ugu deeqdo, isla markaana halkaas la ga soo qaadoi doono.
Lataliyaha 1aad saf aarada Soomaaliya ee Shiinaha Saciid Jaamac Mire ayaa isnaauga mahadnaqay dowladda shiinaha sida hagar la’ aanta ah ay u garab taagan yihiin dowladda Fed eraalk, isagoo si gaarana uga mahadnaqay tal aalka ay Soomaaliya ugu deeqday.
Arrinkan ayaa imaanaya kadib markii dowla ha caalamka ay bilaabeen in ay dadkooda ka ta laalaan cudurka COVID19 oo aduunka dhan dhibaato ku haaya, waxaana xusid mudan in ho rey Caasimadda dalka loo keenay Tallaalka COVID19.
Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda xil gaasriinta Xasan Xus een Xaaji ayaa boo gaadiyay guulaha Cii danka Xoogga dalka Soomaa liya ay ka ga areen ho wlgal ay ka fuliyeen deegaanno ka tirsan Galm udu "Geesiyaasha naftood hurayaasha ah ee qaran keenn waxay Shalay la wareegeen deegaano hor leh oo ka tirsan Galgaduud , Maamulka , shacabka iyo masuuliyiintii gacanta ka geestay xoreynta goobahaas waa ku mahadsanyihiin , Waxaan Shacabka Soomaaliyeed guud ahaan ka codsanayaa in CXDS ay ku garab istaagaan ciribtirka argagixisadda " ayuu yiri Wasiirka Dif aaca oo la hadlay idaacadda Ciidamada qalab ka Sida
Ciidanka Xoogga ayaa Shalay barqadii la Wareegay Deegaanada Labidulle iyo Dhabana dhulkuheysoo hore ay gacanta ugu hayeen Xubno ka tirsan Ururka AlShabaab.
SARKAAL KA TIRSAN ALSHABAAB OO U GACAN GALAY D/F/SOOMAALIYA.
Ciidamo ka tirsan Ururka 4aad Guutada 16a ad ee Ciidamada xoogga dalka Somaaliyeed ayaa waxaa saacadihii la soo dhaafay howlgallo culus ka sameeyeen dega ano ka tirsan Gobolka Sha beellaha Hoose.
Howlgalada oo ahaa ku wo ka dhan ah Urur ka AlShabaab ayaa waxaa ay Ciidamada ka sameeyeen degaannada BaladulAmiin, Dudu mii iyo Fuulaay oo dhamaantood hoostaga deg mada Walanweyn ee G/Sh/Ho ose..
Kusimaha taliyaha Ururka 4aad ahna Abaa nduulaha Ururka laba xidigle Maxamed Cabdu qaadir Cali ayaa sheegay in howlgalka lagu qab tay Sarkaalkii u qabilsanaa AlShabaab waxaugu yeeraan Sakawaadka, balse uusan shaacin Magaciisa.
Ugu dambeyn Abaanduulaha Ururka 4aad ee 16aad laba xidigle Maxamed Cabduqaadir Cali ayaa sheegay in Ciidamada ay howlgalka ay sii wadi doonaan ilaa degaannada Sh/Hoose ay ka saarayaan AlShabaab.
Howlgalka ay Ciidamada dowladda Sooma aliya ka sameeyeen Shabeellaha Hoose ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli sabtidi 7kaan ay AlShabaab weerarro culus ku qaadeen degma da Awdheegle iyo degaanka Bariire, weerarada as oo sababay khasaaro kala duwan.
DHISMAHA WADDADA MUQDISHO IYO JOWHAR OO BILLOWDAY IYO CIIDAMO GAAR AH OO SUGAYA AMNIGA
Waxaa si rasmi ah u billowday mashruuca dhismaha waddada Laamiga ah ee isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar,taas oo ka mid ah heshiisyadii dhismaha Wadooyinka ee ay kala saxiixdeen dowladda fedraalka iyo dow ladda Qatar.
Gaadiidka loogu talagalay dhismaha ee is kugu jira Baalayaasha iyo Makiinadaha Laami ga ee ay leedahay dowladda Turkiga ayaa hal kaasi la geeyay,waxaana si toos ah u billowday shaqada dhismaha Laamigaas.
Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad ayaa la geeyay waddadaas,kuwas oo sugaya amniga Injineerada Turkida iyo agab ka dhismaha Wadadaasi.
Dadka ku sugan Isgooyska EXkoontarool Balcad ayaa sheegay in gebi ahaanba waddada laga mamnuucay isticmaalka Gaadiidka dadwey naha iyo kuwa gaarka loo leeyahay, islamar kaana lagu jaray Dhagxaan.
Billaabashada dhismaha waddadaan ayaa ku soo beegmaya,xilli la soo gabagebeeyay dhi smaha waddada isku xirta magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye ee gobolka
MIDOWGA MUSHARIXIINTA OO SHAACIYAY IN FARMAAJO HORISTAAGAY DOORSHO HESHIIS LAGU YAHAY
Xubnaha Midowga Musharixiinta madaxwey naha ayaa ku eedeeyay Madaxweynaha mu ddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed C/hi Farmaajo in uu ishoristaag ku sameeyay in ay dalka ka dhacdo doorasho loo dhan yahay.
Qoraal kasoo baxay Midowga Musharixiinta oo ka kooban laba Bog ayaa waxaa lagu shee gay in Madaxweynaha xilligiisu dhammaaday uu carqaladayn joogta ah ku hayo geeddi socodka lagu baadigoobayo doorasho wadar oggol ah oo si nabad ah ku dhacda, iyadoo ujeedkiisu yahay muddo kororsi khilaafsan dastuurka, halisna ku ah xasilloonida dalka.
Sidoo kale Midowga Musharixiinta waxaa ay qoraalkooda kusoo bandhigeen 7 qodob oo ay sheegeen in Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed C/hi Farmaajo uu qaaday si uu u carqaladeeyo doorasho ka dhac da dalka, waxaana ay kala yihiin qodobada.
In uu 6dii Bishii febaraayo kasoo kacay go goshii shirka Dhuusomareeb 4 oo ay ku kulansa naayeen madaxda dawlad goboleedyada iyo ku wa federaalka ah, isla maalintii uu shirka ka soo baxay ayuu isku dayay in uu Baarlamaanka ka raadiyo muddo kordhin, balse ay ka hor istaage en xildhibaanno diiddan sharci ku tumashada.
2) In iyadoo Muqdisho loogu ballansan yahay shir arrimaha doorashooyinka lagu dham maystirayo uu habeennimadii 19ka Febraayo amar ku bixiyey in la weeraro labadii Madaxwe yne ee xilka kaga horreysay, iyo guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka, wuxuuna isla subixii 19ka Febraayo amray in la rasaaseeyo dibadbax nabadeed oo ay hoggaaminayeen qaar ka mid ah xubnahaa Midowga Murashaxiinta, xildhiba anno iyo wasiirro hore.
uu amray in mas’uuliyadda amniga garoonka di yaaradaha laga wareejiyo Booliska kastamka oo weligiis gacanta ku hayn jiray, laguna wareejiyo ciidanka Haramcad oo ku caan baxay weerarr ada lagu qaado siyaasiyiinta iyo mucaar adka, si uu khalkhal u geliyo amniga wufuudda madax weynayaasha Puntland iyo Jubbaland, loogana hor istaago kulammada ay la yeelanayaan siya asiyiinta, xildhibaannada iyo qaybaha kale ee bulshada.
4) In uu carqaladeeyey in ay natiijo ka soo baxdo shirar hor dhac ah oo ay dawlad gobol eedyada shanta ah uga heshin lahaayeen aja ndaha shirka iyo dadaallo ay wadeen xubnaha beesha caalamka oo lagu kulansiin lahaa raysal waasaraaha xukuumadda xil gaarsiinta iyo madaxda dawlad goboleedyada.
5) Inuu 27kii Maarso, iyadoo ay shir u fadhiy aan sha nta dawlad goboleed uu guddoomiyaha Gol aha Shacabka kula heshiiyey meelmarinta muddo kororsi labo sano ah, laakiin ay hor istaageen xildhibaanno ka soo horjeeda sharci darrida muddo kordhinta.
7) In ujeedkiisu uu ahaa in shirka u dhex eeya madaxda dawlad goboleedyada iyo ku wa federaalka uusan miro dhalin. Waxaana cadda yn u ah in wasiirkiisa warfaafinta uu farriin maa lmo ka hor la duubay ku eedeeyey fashilka shi rka madaxda dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland.
Goluhu wuxuu ku ammaanayaa madaxda da wlad goboleedka Jubbaland iyo Puntland oo mu ddo bil ah ku sugnaa magaalada Muqdisho, dha bar adayga iyo sabarka ay muujiyeen, welina ay diyaar u yihiin in shirku sii socda, si loo helo doo rasho wadaroggol ah oo si nabad ah ku dhac da, halka madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday uu ku dhawaaqay in shirkii burbu ray.
Ugu dambeyn midowga Musharixiinta ayaa waxaa ay ugu baaqeen madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday in uu shirka dib ugu la abto, si loo xaqiijiyo qabsoomidda doorasho wad ar ogol ah oo si nabad ah ku dhacda,isla markaana ay ummadda Soomaaliyeed iyo bee sha caalamkaba u caddaynayaan inmadaxwey naha xilkiisu dhammaaday uu qaadayo mas’uul iyadda fashilka ku yimaada shirka, tahayna in lagula xisaabtamo.
DUQA MUQDISHO;”AQALKA SARE EE HADDA JIRA WAXA UU KU DHISAN YAHAY SI SHARCI DARRO AH”
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed "Filish” ayaa ku tilmaamay Xil dhibaannada Aqalka sare ku wo ku dhisan sharci darro.
Guddoomiye Cumar Filish waxaa uu sheegay in Aqalka sare dhismihiisa uu ku yaal Dastuurka balse kan hadda jira sidii lagu dhisayay la garab maray oo dad dano gar ah watay ay si boob ah ku dhis een.
"Waxaay aheyd in wixii la dhisaayo oo aw ood qeybsi ah in 4.5 lagu qeybsado ama tir ada Gobolada lagu qeybsado intaba lama sameyn, beel waxay qaadatay 8 midna 17, taas ayaa ho rta jirta marka beeshii 17 heysatay waxay rab taa in ay difaacato oo aan laga qaadin waana cadaalad darro ayuu yiri” Cumar Filish.
Duqa Muqdisho oo ka hadlayay sababaha ke enay in heshiis laga gaari waayo qabashada do orashooyika ayuu eeda dusha uga saaray ma amulada Jubbaland iyo Puntland.
"Doorashada inay qabsoonto oo si xalaal ku qabsoonto waxaa looga fadhiyaa dowladda Fe deraalka, dowladda waa qabaneynaa diyaar u nahay taagan tahay, kuwa kale waxay taagan yi hiin maba la qabanaayo, illaa qodobkan aniga la ii fuliyo, waa in danteyda aan hela, haddii kale maba la qabanaayo”
Duqa Muqdisho ayaa waxa uu ka mid ahaa madaxdkii ka qeybgalaysay shirka loogaga had layay arrimaha doorashooyinka kaasoo aan wax heshiis ah laga gaarin.
Madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed islamarkaana ah Musharax Ma daxweyne ayaa ku eedeyay Madaxweynaha Mu ddo xileedkiiso dhamaaday Fashilka Shirkii Ari maha doorashooyinka.
Waxaa uu sheegay in ay tahay wax laga xu maado burburka ku yimid shirkii wadatashiga Qaran ee ka socday teendhada Afisyoni.
"Waxaa xaqiiq ah in shirkaaas uu ahaa mid umadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba ay aad oga dhursugayeen, burburkiisana uu nati ijo xumi ku reebi doono guud ahaan dalka, gaar ahaanna doorashadiisa”ayuu yiri Guuleed.
Waxaa kaloo intaasi kusii daray hadalkiisa "Natiijada burburka shirka iyo masuuliyaddiisa waxaa si buuxda u qaadaya madane Maxamed C/hi Farmajo, oo asagu diidan inay dalka ka dha cdo doorasho xor iyo xalaal ah, rabana inuu tala da dalka ku sii heysto boob iyo waddo aan sha rci aheyn”
Ugu dambeyntii waxaa uu yiri "Waxaan ku ba aqeyna in dadka Soomaaliyeed u istaagaan in ay dalkooda ka badbaadsadaan burbur iyo fa shil ku yimaada mar kale, qof kasta oo naga mid ahna uu dareemo khatarta taagan iyo marxalad da adag ee uu dalku haatan marayo”
MAHAD SALAAD "INTA HAY’ADAHA AMNIGA FARM AAJO HOOS TEGAYAAN DOORASHO XOR IYO XALAAL AH DALKAAN KAMA DHICI KARTO”
Xildhiban Mahad Maxamed Salaad ayaa she egay in dalka aysan ka dhici Karin doorasho xor iyo xalaal ah,inta hay’adaha amniga Soomaaliya ay hoos tagayaan madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday, amarna ay ka qaadanayaan.
Sababta ayuu ku sheegay in baarlamaanka uu soo dhoobay ciidamo,islamarkaana wadooyi nka ka xirtay Xildhibanadii,isaga oo intaasi ku sii daray in uu weerar ku qaaday madaxweynayaa shii sida Dastuuriga ahaa xilka u wareejiyay, As kartoodiina laayayhubkiina ka qaatay,amarna ku bixiyay in la laayo bananbaxayaasha in aan la aamini Karin.
Dowladaha Puntland iyo Jubaland waa ku mahad san yihiin in aysan sha haado suur (marqaatibeenaale) ka noqon door asho ku sheeg Farmaajo rabo inuu kaligiis isku caano shubo isagoo cudud ciidan adeegsanaya!
Inta hay’adaha amniga Farmaajo hoos tagaya an, amarna ka qaadanayaan doorasho xor iyo xalaal ah dalkaan kama dhici karto.
Sababtoo ah ninka Barlamaan waqtigiisii dha maaday boqolaal ciidan ah soo dul dhoobay. Xil dhibaanada jidadka ka xirtay, amarna ku bixiyay haddii ay sheeda soo istaagaan in shafka xabad laga geliyo. Madaxweyneyaashii hore sida dimuquraadiga ah xilka ugu wareejiyay habeen saq dhaxe weeraray ee askartoodiina laayay, hubkoodiina xoog ku qaatay. Siyaasiin iyo shacab si nabad ah u bannaanbaxaya rasaas noolnool la dhacay, hadii mar dambe ay soo baxaana amar ku bixiyay inla laayo. LAGUMA AAMINI KARO W/Q. Xildhiban Mahad Salaad
Iiraan oo laga gubay Markab Dagaal
Markab dagaal oo ay leeyihiin Ciiddanka Ilaalada Kacaanka Iiraan ee IRGC ayaa Dorraad lagu qarxiyey Badda Cas, gaar ahaan inta u dhe xeysa Xeebaha Yemen iyo Eritrea.
Markabkaasi oo lagu magacaabo SAVIZ waxaa la sheegay inay la kacay Miino baddeedka, wa xaana soo gaaray Khasaaro aan weli la shaa cinin.
Telefishinka Al Xadath ayaa baahiyay in ay ka dambaysay Israa’iil, taasi oo u muuqato mid aargoosi ah, kadib, markii Iiraan lagu eedeeyey Qarax lal beegsaday 2 Markab oo Israa’iil lahe ed.
Markabka la qarxiyey waxa uu dhowr sano ku sugnaa Badda Cas, halkaasi oo la sheegay inuu soo gelbin jiray Maraakiibta Ganacsiga Iir aan ee ka gudba Gacanbiyoodka Badda Cas.
DAD KU DHINTAY SHIL GAARI OO KA DHACAY GUDA HA KENYA
Inta la xaqiijiyay shilka ayaa waxaa ku dhin tay 20 Ruux halka ay ku dhaawacmeen 14 kale, kuwaas oo dhaawacooda la geeyay Isbitaalka Magalada gaarisa, waxaa sidoo kale burbur xo ogan uu gaaray Gawaaridii shilka gashay.
Waxaa intaas uu ku daray in dhowr shaqa ale dowladeed ah oo katirsan dowlad deegaan ka Kilifi ay shilka ku dhinteen, isla markaana ay wadaan baritaano la xiriira sababihii keenay inay labada Bas isku dhacaan.
Waddada xiriiriso deegaanka Malindi iyo magaalada Mombasa ee gobolka Xeebta ee dal ka Kenya ayaa waxaa dhowr jeer ka dhacay Shi lal Gaari oo geystay khasaaro kala duwan, iya da oo booliska Kenya ay baritaan ku hayaan sababihii ka dambeeyay.
COVID19 OO FARA BA’AN KU HAYA DALKA BRAZIL
In ka badan 4,000 oo qof ayaa 24ki saac ee la soo dhaafay cudurka Covid19 ugu geeri yootay dalka Brazil, taasoo ka dhigtay khasaaro nafeed tii ugu badneyd ee maalin gudaheed la ga diiwaangeliyo dalka ugu weyn Koofurta Ame erica.
Wasaaradda caafimaadka Brazil ayaa Talaa dadii shaacisay, in 4,195 ay 24kii saac ee lasoo dhaafay cudurka Covid19 ugu Geeriyoodeen guud ahaan dalkaasi. Wasaaraddu waxay shee gtay in tirada dhimashada ay sii kordheysay tan iyo bishii February ee sanadkan.
Faafista cudursidaha keena xanuunkan ayaa sare u sii kaceysay dhowrki bilood ee lasoo dhaafay. Khubarada caafimaadka Brazil ayaa arrintaasi ku sababeeyay, nuucyada cusub ee xanuunka oo soo badanaya iyo dadka oo aanan dhaqangelinin talooyinka caafimaad sida kala fogaanshaha.
Khubarradu waxay saadaalinayaan in haddii uu xaalku sidan u sii socdo ay Brazil noqon do onto dalka ugu dhimashada badan cudurka Cov id19 guud ahaan dunida.
Mareykanka ayaa kaalinta koowaad wali ku jira, waxaa xanuunka ugu dhintay in ka badan 555,000 oo ruux, halka Brazil ay tirada dhima shada mareyso ku dhawaad 337,000 oo qof.
MAAMULKA DOWLAD DEEGAANKA OO WAR KA SOO SAARAY KHASAARAHA DAGAALKII SOOMAALIDA IYO CANFARTA
Tirdo dad ah ayaa ku dhintay dagaallo maa lmihii u dambeeyay ka socday xadka Sooma alida iyo Canfarta ee dalka Itoobiya.
Wararka waxay sheegayaan in dab la qaba dsiiyay dhowri guri oo ku yaallay deegaannadaa lagu muransan yahay.
Saraakiisha gobolka Canfarta waxay ku eedeeyeen ciidamada Liyuu booliska Soomaa lida in 30 qof ay sabtidii ku dileen halkaas.
Halka mas’uuliyiinta Dowlad Deegaanka Soom aalida ee Itoobiya ay sheegeen in ugu yaraan 25 qof oo xoolo dhaqatad ahaa ay maleeshiy aad kasoo tallaabay dhinaca Canfarta ay ku dileen deegaanka.
CUDURKA COVID19, OO TODOBAAD GUDIHIIS KU DHACAY 4MALYAN OO QOF
Hay’adda caafimaadka adduunka ayaa she egtay in cudurka Karoona Fayras ku dhacay in ka badan 4 malyan oo qof todobaad gudihiisa.
Xogtaan ay hay’adda baahisay ayaa tilamam aneysa in faafitaanka Karoona kordhay 5% laga soo billabo 29 Maarso ilaa 4tii Abriil. Hay’addu waxey intaas ku dartay in 71,000 oo qof ay u dhimatay todobaadkii lasoo dhaafay taas oo muujineysa koror ah 11%
Waxaa laga diiwaan geliyay qaaradda Yurub gudaheeda in Karoona ku dhacay in ka badan 1.6 malyan oo qof isbuuc gudihiisa.
MALEESHIYAAD KA TIRSAN KOOXDA DAACISH OO AFDUUBATAY 19QOF.
Maleeshiyo gacansaar la leh kooxda Daacish ayaa afduubtay ugu yaraan 19 qof oo u badna dad rayid ah, kaddib markii ay weerar gaadmo ah ku soo qaadeen magaalada Alsa’an ee bartamaha wadanka Syria.
Afduubkan oo Talaadaadii dhacay waxaa sideed ka mid ah dadkan ay ka tirsanaayeen ciidanka Syria, halka 11ka kalena ay ahaayeen dad rayid ah.
Agaasimaha hay’adda kormeereyaasha Syria ee fadhigeedu yahay Ingiriiska Rami Abdurahman ayaa sheegay inkasta oo ku dhawaad maalin kasta ay duqeymo cirka ah fuliyaan Russia oo ah xulufada ugu weyn Syria, haadana Daacish ay weli khatar ku yihiin Syria iyo xoogagga madaxweyne Bashar alAssad.
"Daacish waxay ku tiirsan tahay unugyada yar yar ee awooda u leh inay ku dhex dhuuntaan goobaha gacanta ugu jira taliska Asad iyo meelaha dadku ku badan yihiin, isla markaana ay fuliyaan weeraro deg deg ah,” ayuu u sheegay VOA oo telefoonka ku wareysatay. "Maleeshiyadan waxay si fiican u yaqaanaan meelaha ay ku dhuumaalaystaan iyo meelaha kale ee ku yaal Syria sida Badiya.” ayuu Rami Abdulrahman sii raaciyay.
Abdulrahman ayaa intaa ku daray in lam adegaanka Syria, ee loo yaqaan Badia, ay ka dhaceen afduubyo badan oo ay geysteen mal eeshiyada Daacish bilihii la soo dhaafay.
KEYMAHA AMAZON: DUULIYE AY DIYAARADD IISA BURBURTAY OO 36 MAALMOOD KA DHUUM ANAYAY MASAS IYO YAXAASYO
Isagoo kaligiis ah ayuu ku dhex lumay qeybta ugu fog ee keymaha roobka badan ee dalka Brazil. Laakiin ugu yaraan Antonio Sena wuu gar anayay waxa u weyn ee halis galinaya naftiisa: "Xayawaannada ugaars ada dadka ee ku nool Keymaha Amazon oo ah shabeellada, yaxaas yada iyo masaska jabisooyinka ah."
Duuliyahan 36 jirka ah kama uusan walwalsaneyn kaliya inuu cunto u noqdo xayawaannadaas khatarta badan, balse wuxuu isaga laftiisa ku khasbanaa inuu helo raashin biyo iyo hoy uu seexdo.
Waxa kale ee cabsidiisa sii badinayay waa in kaddib burburka diyaar rad iisa ay maalmo badan qaadan karto in la badbaadiyo.
Hase yeeshee Antonio wuxuusan ogeyn inuu muddo hal bil iyo dhowr maalmood ah u dagaallami doono sidii uu noloshiisa uga badbaadin lahaa baahida iyo kalinimada.
Mar qura ayuu ka war helay in diyaaraddiisa ay cilladowday, erayo ba dan oo qeylo ah ayuuna isku daray, sida laga dhageystay hadalladii ugu dambeeyay ee telefoonka xiriirka diyaaradda.
Diyaaraddii uu kaligiis watay ayaa la dhacday bishii January xilli uu saanad u waday goob macdanta laga baaro oo ku taalla keymaha gudah ooda.
"Matoorka ayaa si lama filaan ah u damay markii ay saacaddu ahayd 900m. Waxaan ku khsabanaaday inaan ku dago bartamaha keynta," ay uu yidhi, isagoo la hadlayay BBCda.
Isagoo geedo ku dul dajinaya diyaaradda oo uusan xakameyn karin ayuu si mucjiso ah u maareeyay inuu ku dago meel u dhow dhinaca waqo oyi ee wabiga Amazon.
Laakiin inkastoo uu ka badbaaday dhimasho, dhibaatooyinkiisa marka as unbay billaabanayeen. Shidaal ayaa ka daadanayay diyaaradda.
"Waxaan ku khasbanaa inaan ka tago diyaaradda sababtoo ah waan og aa inay tahay xaalad khatar ah," ayuu yidhi.
Maadaama uusan hoy ka dhigan karin diyaaradda, wuxuu joogay meel aan ka fogeyn, isagoo rajeynayay in la maqlay farriintiisii ugu dambe ysay loona soo diray koox badbaadisa.
"Waxaan soo qaatay wax kasta oo aan islahaa way ku caawin karaa haddii aad dhowr maalmood ku jirto keynta."
"Xilligaas waxaan qiyaasayay inaan keynta roobka badan ku jiri karo shan ilaa siddeed maalmood, oo ah xilliga caadiga ah ee howlgalka badbaadi nta uu qaato."
Laakiin isbuuc ayaa gudbay, cid i caawisana ma aysan imaanin.
Inuu kaligiis isku tashto
Antonio wuxuu go'aansaday in haddiiba uu doonayo inuu dadkii uu je claa dib u arko uu ku khasban yahay inuu ka tago goobta shilka diyaarad da ee lagu soo aqoonsan lahaa, uuna u lugeeyo meel uu ku badbaadi karo.
"Waxaan xaqiiqsaday in aysan i heli karin oo ay tahay inaan isku ta shado si aan qoyskeyga mar kale u arko."
Xilli subax ah ayuu dhaqaaqay si uu u raadiyo meel ay dad ka ag dhow yi hiin. "Waxaan go'aansaday inaan u baxo dhanka bari ee ay qorraxdu ka soo baxday, subax kastana waxaan lugeyn jiray labo ilaa afar saacad ood."
"Socodka kaddib waxaan ku khasbanaa inaan qorsheysto meeshii aan habeenkaas ku hoyan lahaa waxaan dhisanayay hoy waxaana diy aarsanayay dab aan shito marka uu gabalku dhaco."
Inkastoo keymaha Amazon ay halis badan yihiin, khatarna ku yihiin qof walba oo kaligiis ah gaadiidna aan wadanin, Antonio wuxuu yaqaanna y xirfado yar oo uu ku badbaadi karo.
"Waxaan soo bartay tababar ku saabsan sida looga badbaado khat arta dhulka keymaha ah markii aan qaadanayay cilmiga shaqada duulista hawada."
"Sidoo kale, waxaan ku dhashay kuna noolaa keymaha Amazon."
Dadkii ku noolaan jiray gudaha keynta ayuu kasoo bartay macluumaad ku saabsan halkaas xogtaasna wuxuu adeegsanayay xilli uu u dhaxeeyay nolol iyo geeri.
Waxa ugu horreeya ee xirfadda uu lahaa Antonio ay ka caawin karta waa helitaanka raashinka, wuxuuna raadsan jiray xayawaanka duur jog ta ah ee la cuni karo.
"Waxaa jiray miro aanan waligay arkin balse waxaan arkayay in daan yeerrada ay cunayeen," ayuu yidhi. "Sidaas awgeed waxaan is iri haddii ay daanyeerradu cunayaan adigana waad cuni kartaa."
Laakiin wuxuu u baahnaa wax ka badan miro.
Wuxuu helayay ukumo ay shimbiro dhigeen, kuwaasoo uu duban jiray.
Iska ilaalinta xayawananada dilaaga ah
Walow uu helayay cunto ku filan oo uu ku noolaado, wuxuu sidoo kale u baahnaa inuu iska ilaaliyo sidii uu qado ugu noqon lahaa xayawaannada halista ah ee keynta.
"Mar walba oo aan meel istaago oo aan hoy ka sameysanayo, waxa an ka dhiganayay meel buuro dushooda ah," ayuu yidhi.
"Sababtoo ah shabeellada, yaxaasyada iyo jabisooyinka waxay xiriir la leeyihiin biyaha, sidaas darteedna waligay ma dagin meel ay biyo ka dhow yihiin."
Antonio wuxuu sidoo kale ka feejignaa inuu sameeyo shanqaro inta uu dhex socdo keymaha.
Wuxuu ogaa in xilliga maalintii ay u badan tahay in uu xayawaan soo wee raro haddii uu maqlo shanqartiisa.
Rajo ugu dambeyn
Inkastoo xirfadaha badbaadada ay u shaqeynayeen Antonio, waxaa ka dhacay miisaan aad u badan.
Isbuucyo ayaa gudbay tan iyo markii ay diyaaradda la dhacday.
Laakiin 36 maalmood kaddib, ugu dambeyn wuxuu u yimid koox dad ah.
"Muddo dheer markii aan socday ayaan la kulmay koox dad reer Barzil ah oo lowska beerta, kuwaasoo ku sugnaa meel geeri go'an ah," ayuu yidhi.
Markii hore ma uusan arki karin balse wuxuu ku soo raacay codkooda iyo shanqaraha ay sameynayeen.
Ugu dambeyn, dhibaatadiisii daba dheereyd ayaa halkaas ku idlaat ay.
Diyaarado iyo helicoptersyo ayaa loo diray si ay u raadiyaan, laakiin waxay ka quusteen dhowr isbuuc ka hor inta uusan dadka la kulmin.
Haddii Antonio uusan soo lugeyn lahayn, kana soo tagi lahayn goobtii ay diyaaradda kula dhacday, waligiis ma uusan la kulmi lahayn qoyskiisa mar kale. XIGASHO:BBC
WADAHADALLADII MASAR, SUDAN IYO ITOOBIYA OO NATIIJO LA’AAN KU DHAMAADAY
Masar, Sudan iyo Ethiopia ayaa ku guuldarreystay inay wax hor umar ah ka sameeyaan wadahadalladii ugu dambeeyey ee uu soo ag aasimay Midowga Africa, ee xalka loogu raadinayey muranka ka taagan biyoxire enka ay Ethiopia ka sameyneyo webiga Nile.
Wasiirada arrimaha dibedda iyo kuwa waraabka ee saddexda dal ayaa ku kul may magaalada Kinshasa ee caasimadda dalka Congo oo iminka ah gudodonka ururka Midowa Afrika.
Wareeggii ugu dambeeyey ee wadahadallada ayaa isku dayayey in ay heshiis looga gaaro sidii dib loogu billaabi wadaxaajoodka ku saab san howlgalka ay Ethiopia ku buuxineyso biyoxireenka. Si kastaba, kulanka oo socday afar maalmood ayaa soo dhammaaday ayada oo aan heshiis la gaarin, kadib markii Ethiopia ay diiday qorshe ay soo je edisay Sudan, oo Masarna ay taageertay, oo ahaa in dhex dhexa adiyayaal caalami ah laga qeybgeliyo wadahadallada, sida ay sheeg een Masar iyo Sudan.
Diblomaasiga ugu sarreeya Masar ayaa sheegay inay murankan gayn doonaan Golaha Ammaanka ee QM. Wasaaradda arrimaha dib edda Ethiopia ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in "Ethiopia aysan geli karin heshiis diidaya xuquuqdeeda iminka iyo tan mustaq balka ee isticmaalka webige Nile.”
Masar ayaa horey u sheegtau in kulankii ugu dambeeyey ee Kin shada uu ahaa fursaddii ugu dambeysay ee heshiis lagu gaari karo ka hor inta aysan Ethiopia dib u billaabin buuxinta biyoxireenka.
Ma cadda waxa xigi doona, hase yeeshee Masar ayaa dhowaa nahan Jeedineysa hanjabaado la xiriira xiisadda